MATEU 16:28-17:13 MAKO 9:1-13 RUKA 9:27-36
VADZIDZI VANORATIDZWA JESU ACHISHANDUKA
VAAPOSTORA VANONZWA INZWI RAMWARI
Jesu paari kudzidzisa vanhu munharaunda yeKesariya Firipi, iyo iri makiromita 25 kubva kuGomo reHemoni, anotaura mashoko anoshamisa vadzidzi vake okuti: “Chokwadi ndinoti kwamuri pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu kusvikira vatanga vaona Mwanakomana womunhu achiuya muumambo hwake.”—Mateu 16:28.
Vadzidzi vanofanira kunge vari kushamiswa kuti Jesu ari kurevei. Papera rinenge vhiki, anotora vaapostora vake vatatu vanoti Petro, Jakobho, naJohani oenda navo mugomo refu refu. Hunofanira kuva usiku, nekuti vadzidzi vatatu ava vane hope. Paanenge achinyengetera, Jesu anoshanduka vakatarisa. Vaapostora ava vanoona chiso chake chichipenya sezuva uye nguwo dzake dzakati ngwee sechiedza dzichibwinya.
Vanobva vaona varume vaviri vavanozoziva ‘saMosesi naEriya.’ Varume ava vanotanga kutaura naJesu ‘nezvokuenda kwake kunofanira kuzoitika muJerusarema.’ (Ruka 9:30, 31) Kuenda uku kunofanira kunge kuri kureva rufu rwaJesu uye kumutswa kwaachazoitwa, kwaakataura nezvako misi ichangopfuura. (Mateu 16:21) Hurukuro iyi inobva yaratidza kuti rufu rwaJesu rwunonyadzisa rwunofanira kutoitika, izvo zvinobva zvapesana nekurudziro yakambopiwa naPetro.
Iye zvino vadzidzi vatatu ava vanyatsosvinura uye vari kushamiswa nezvavari kuona nekunzwa. Ichi chiratidzo asi zvinhu zvacho zviri kuita sezviri kutonyatsoitika zvekuti Petro anotanga kutomira mirawo achiti: “Rabhi, zvakanaka kuti tive pano, naizvozvo ngativakei matende matatu, rimwe renyu, rimwe raMosesi uye rimwe raEriya.” (Mako 9:5) Kungava here kuti Petro ari kuda kuita izvi kuti chiratidzo chacho chimboita nguva chichiitika?
Petro ari pakati pekutaura, gore rinopenya rinovafukidza, uye inzwi rinobuda mugore imomo richiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandafarira; muteererei.” Vanzwa inzwi raMwari, vaapostora vanotya vobva vawira pasi, asi Jesu anovakurudzira achiti: “Simukai, musatya.” (Mateu 17:5-7) Pavanosimuka, vadzidzi vanongoona pasara Jesu chete. Chiratidzo chacho chapera. Pavanenge vava kudzika mugomo kwayedza, Jesu anovaudza kuti: “Musaudza munhu zvamaratidzwa kusvikira Mwanakomana womunhu amutswa kubva kuvakafa.”—Mateu 17:9.
Kuona kwavaita Eriya muchiratidzo kunoita kuti vadzidzi vave nemubvunzo. Vanobvunza kuti, “Saka nei vanyori vachiti Eriya anofanira kutanga kuuya?” Jesu anopindura kuti: “Eriya akatouya uye havana kumuziva.” (Mateu 17:10-12) Jesu ari kutaura nezvaJohani Mubhabhatidzi, uyo akaita basa rakafanana neraEriya. Eriya akagadzirira Erisha nzira, izvo zvakaitwawo naJohani kuna Kristu.
Chiratidzo ichi chinofanira kunge chasimbisa Jesu nevaapostora zvikuru! Charatidza zvichange zvakaita Kristu muUmambo hwake. Saka vadzidzi vakaona “mwanakomana womunhu achiuya muumambo hwake,” sezvakanga zvavimbiswa naJesu. (Mateu 16:28) Vari mugomo, vakava “zvapupu zvakaona ukuru hwake.” Kunyange zvazvo vaFarisi vaida chiratidzo chekuti Jesu aizova Mambo akasarudzwa naMwari, Jesu haana kuvapa chiratidzo ichocho. Asi vadzidzi vaJesu vepedyo vakaona achishanduka izvo zvakabva zvasimbisa uprofita hweUmambo. Ndokusaka Petro akazonyora kuti: “Tine shoko rouprofita rakaitwa kuti rive rechokwadi kwazvo.”—2 Petro 1:16-19.
Vamwe vadzidzi vanoona Jesu achiuya muUmambo sei vasati vafa?
Muchiratidzo chakaonekwa nevadzidzi, Mosesi naEriya vanotaura nezvei naJesu?
Chiratidzo chekushanduka kwaJesu chinosimbisa sei vateveri vaKristu?
Kutenda kwaPetro kwakamubatsira sei kuti abvume kururamiswa naJesu?